Qalabka budada Boldenone
Nandrolone budada budada
Taxanaha budada Trenbolone
/blog/Lumid Miisaan/Xiddiga ugu sareeya 10 aduunka ee ugu fiican ee lagu iibiyo miisaanka budada
Posted on 09 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Lumid Miisaan. Waxay leedahay 58 Comments.
Lumid Miisaan Taariikhda Daroogada
Daroogooyinka lumay miisaanka kowaad, oo loo yaqaano hoos u dhigista dufanka waqtiga, waxay noqdeen kuwo la heli karo dhammaadka 1800s. Inkasta oo daroogada ay sababtay waxyeelo daran, waxay sii waday in la heli karo isticmaalka ilaa 1960s.
Daawad cusub oo loo yaqaan Dinitrophenol ayaa lagu soo bandhigay 1930s waxayna noqotey mid caan ku ah maaraynta miisaanka. Daawada ayaa soo saartay saameyn heerkul ah oo jidhka ah, taas oo fududeynaysa miisaanka.
Bartamihii 1950s, amphetamines ayaa la heley waxayna noqotey inay noqoto daawada miisaankeedu yahay miisaanka doorashada. Waxay fududeeyeen miisaanka luminta adoo xakameynaya rabitaanka cuntada. Nasiib daro, waxay kor u qaadday khatarta hypertension sambabada, taasoo keentay in ay ka baxdo suuqa 1968.
1970s, eefedrine wuxuu noqday daaweyn loogu talagalay miisaanka luminta. Daawada, si kastaba ha ahaatee, waxay dhalisay waxoogaa dareen-celin ah oo keentay in lagu soo bandhigo walxo halis ah.
1973, fenfluramine ayaa loo ansixiyey miisaan culus. Dadwaynaha ayaa kor u kacay 1992 markii la isku darey phentermine si loo abuuro daroogo miisaanka loo yaqaan 'phen-phen. Nasiib daro, daroogadu waxay sababtay waxyeelo xun, taasoo keentay in ay ka baxdo suuqa 1997. Qarnigii 21, daroogada lumay, qaar badan oo ku salaysan qaababka dhirta, ayaa suuxdey suuqa.
Qeybinta daroogada lumis miisaanka
Daawooyinka culus ee miisaanka ayaa loo kala saaraa saddex qaybood oo waaweyn sida waafaqsan farsamooyinka ficilkooda waana sidan soo socota:
(1) Cuncunka cuntada (Cunto)
Maandooriyeyaasha yar yareeya cuntada la yiraahdo waxaa loo yaqaana wakiilada walxaha fudud. Waxay inta badan xakameynayaan rabitaanka cuntada iyagoo u jahawareeraya mudnaanta si aan caadi ahayn. Cibiradu waa dareenka "buuxa" ama qanacsanaanta laga helo cuntada. Kacbiyeyaasha qabatimadu waxay ka shaqeeyaan iyadoo la jaanqaadkaayo neurotransmitter ee maskaxda bini'aadamka oo xukuma cuntada, oo loo yaqaanno noradrenaline (NA).
Daroogooyinkaasi waxay la wadaagaan qaabdhismeed kiimiko oo isku mid ah oo leh NA; Natiijadu waxay ku xiran tahay isku duubnayaasha sida noradrenaline.
Qaab dhismeedka kiimikada ee walxaha xasaasiga ah.
Daawooyinka sidoo kale waxay hagaajiyaan waxqabadka noradrenaline ee "xarunta quudinta" ee maskaxda dadka, hypothalamus. Hypothalamus bani'aadamka ayaa xakameynaya dheelitirka tamarta nidaamka jirka. Macluumaadka ku saabsan dukaamada shakhsiga shakhsi ahaaneed ayaa lagu soo dejiyey hypothalamus kaas oo xakameynaya cunto qaadashada iyo rabitaanka cuntada. Noradrenaline waxqabadka iyo waxqabadka hypothalamus wuxuu leeyahay saameyn yar oo ka yimaada rabitaanka cuntada. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah:
① Sibutramine HCL (Meridia) CAS: 84485-00-7
③ HCL Rimonabant CAS: 158681-13-1
(2) Fatbinta gubashada
Kansarka gubashada maan-dooriyaha miisaanka ayaa kaa caawin kara khasaare baruurta iyada oo la yareeyo jahwareerka, kor u qaadidda dheef-shiid kiimikaadka, iyo in la sii wado raashin caafimaad leh. Waxay kaloo xoojin karaan kartida tababarka iyagoo kor u qaadaya tamarta iyo diiradda. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah:
3. Clinbuterol HCL CAS: 21898-19-1
(3) Hagaajinta dheefshiidka
Daroogooyinka lumay miisaankani waxay shaqeeyaan iyaga oo farageliya awooda nidaamka dheef-shiidka si ay u nuugaan nafaqooyinka gaarka ah ee cuntada. Tusaale ahaan, Orlistat waxaa loo yaqaanaa in lagu xakameeyo burburka dufanka sidaa darteedna wuxuu ka hortagayaa nuugista dufanka. Qaar ka mid ah daawooyinka kale ayaa lagu daboolay hoos u dhigidda nuugista kalooriga iyo dheef-shiid kiimikaadka. Mashruucaan, waxaan ka hadli doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan daroogooyinka soo socda:
Tilmaamaha daroogada lumis miisaanka
Hoos waxaa ku qoran sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan daawooyinka kor ku xusan.
(1) Cuncunka cuntada (Cuntada)
Sibutramine HCL waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee rabitaanka cuntada. Waxay kordhisaa heerarka serotonin iyo heerarka NA-da ee maskaxda, taas oo marka dambe lagu xidho xayawaankooda si ay u xakameyso xakamaynta iyo rabitaanka cuntada.
Daawada Sibutramine oo lagu daray cunto iyo jimicsi ayaa laga yaabaa in ay keento 4.6 kg culeyskiisu ka badan yahay jimicsiga iyo cuntada kaligiis. Iyada oo la yareynayo helitaanka raashinka, sibutramine ayaa sidoo kale laga helay:
• Kor u kicinta qamriga
• Kobcinta arrimaha khatarta ah ee wadnaha
• Kobcinta cayilaanta bartamaha
• Kobcinta gulukooska dhiigga ee bukaanada ku nool diabeteska
• Kobcinta astaanta lipid
• Waxay u dhigtaa heerarka C-peptide, insulin, iyo uric acid
Qaab dhismeedka kiimikada ee Sibutramine HCL
Qalabka kiimikada ee Lorcaserin HCL (Belviq)
Lorcaserin HCl wuxuu u shaqeeyaa daroogooyinka si loo xakameeyo dheef-shiid kiimikaadka iyo cuntada. Daawada ayaa la ansixiyay FDA sanadka 2012 ee dadka qaba BMI ee ka badan 30, iyo bukaanjiifka leh Nooca Body Mass Index ee 27 ama ka badan oo sidoo kale leh baruurta sareeya, cadaadiska dhiigga, iyo nooca sonkorowga 2. Daawada ayaa sidoo kale u shaqeysa si loo wanaajiyo xayawaanka serotonin 2CV ee maskaxda bani'aadamka kaas oo ka caawin kara bukaannada inay dareemaan buuxda ka dib marka ay yaraadaan.
Dhibaatooyinka caafimaadka, 38% dadka qaangaarka ah (oo aan lahayn nooc sonkorowga 2) ayaa ka lumay 5% miisaankooda jirkooda, marka la barbardhigo 16% dadka qaangaarka ah ee lagu daweeyo ciribta.
Qaab dhismeedka kiimikada ee Rimonabant HCL
Rimonabant daawada HCL waa mid ufiican iyada oo ay ugu wacan tahay qaabka cusub ee ficil ahaaneed ee loo yaqaan 'cannabinoid-xNUMX-1' (CB-1) Endocannabinoids ayaa lagu sii daayaa CNS waxayna kicisaa lipogenesis, cunto xumo, iyo dufanka dufanka ee ku xeeran. The Rimonabant HCL ayaa u shaqeeya si loo xakameeyo saameynta endocannabinoids.
Daawada si degdeg ah ayaa loo nuujiyaa ka dib markii maamulka afka. Waxtarka daawadani ee lagu daaweynayo bukaanka ama cayilka bukaanka ayaa la baray barnaamijka afar tijaabo oo la xaddiday, oo loo yaqaan RIO (Rimonabant in Obesity). Dhibaatooyinkaan, Daawadan ayaa la ogaaday in ay tahay mid wax ku ool ah sida orlistat iyo sibutramine.
2,4-Dinitrophenol (DNP ama 2,4-DNP o) waa kiimiko dabiici ah oo leh qaabkan iyo qaabka kimikalka: HOC6H3 (NO2) 2.
DNP wuxuu u shaqeynayaa difonophore, ka ilaalinta protons ka daadi xuubka maskaxaha ee gudaha iyo sidaas darteed boodbax ATP. Tani waxay keeni doontaa tamarta tamarta ATP ee aan waxtarka lahayn. Natiijadu, qaar ka mid ah tamarta laga soo saaro nuugista waxaa lagu burburiyaa qaabka kuleylka.
Waxtarkoodu waa mid si toos ah u dhigma qiyaasta daawada la qaato. Maadaama daroogada daroogadu kordhayso, soosaarka tamarta ayaa noqda mid aan fiicnayn, kor u kaca heerarka dheef-shiid kiimikaadka (iyo xaddiga sare ee baruurta la gubay) si loo daboolo baahida tamarta iyo magdhawga waxtarnimada. DNP waa mid ka mid ah wakiilada ugu fiican ee loo yaqaan ciribtirka phosphorylation oxidative. Fosforyaalka ADP ee ATP synthase ayaa "ku xiran ama ka goosanaya oksaydhka.
(2) Farsamaynta Gubashada
Isku dhexaadinta p-synephrine waa alkaloid. Tani waxay ka dhigan tahay in ay tahay aaladda dabiiciga ah oo laga yaabo in laga helo meelaha dabiiciga ah. Maadada waxay leedahay nitrogen sida saldhig.
Qalabka kiimikada ee qolka kalluunka
Caffeine, nicotine, iyo morphine ayaa sidoo kale ka mid ah fasalka alkaloids sida ay cilmi-baarayaashu sheegeen. Synephrine waxaa caadi ahaan lagu arkaa cuntada dheeraadka ah maareynta miisaanka ama luminta iyo waxqabadka isboortiga.
Sidee ayuu u shaqeeyaa habka jirka?
Kiimikooyinka p-synephrine waxay saameeyaan habdhiska dareemayaasha iyagoo kicinaya xayawaanka adrenergic β3 ee door weyn ka ciyaara thermogenesis iyo lipolysis ee baruurta bunni. Tani waxay ka dhigan tahay in qashin-duubayaashu ay awood u siin doonaan nidaamkaaga inaad ku gubto dufanka tamarta.
Dimethylamylamine waa daawo lagu soo saaray shaybaarka shaybaarka. 1,3-dimethylamylamine (DMAA) waa amphetamine derivative kaas oo loo isticmaalo si ballaaran oo loogu talagalay daawooyinka lagu iibiyo ee Maraykanka. Waxaa loo isticmaalay horraantii sidii adkeesto sanka. Maalmahan, dimethylamylamine waa suuq loo isticmaalo daroogo jireed oo loo isticmaalo miisaan lumis, ADHD (feejignaanta maqnaashaha hyperactive disorder), dhiska jidhka, iyo kor u qaadka waxqabadka.
④ Clinbuterol HCL CAS: 21898-19-1
Clinbuterol, oo sidoo kale loo yaqaan Clen, waa kan ugu adkeysan iyo bronchodilator. Waxaa badanaa loo isticmaalaa si looga hortago weerarrada neefta. Kani waa xarun steroid-sida, laakiin ma aha steroid dhab ah. Waxay ku dhacdaa qaybta of agagaaraha β2.
Clinbuterol wuxuu bilaabi karaa fal-celinta jidheed ee la mid ah adrenaline. Waxay kicineysaa qaybaha beta-2 ee qaababka daaweynta adrenergic. Tani waxay keenaysaa kororka cAMP (Wicitaanka ATP ee looga baahan yahay iskudhufka gacanta). Natiijo ahaan, kinase A wuxuu kordhiyaa. Protein kinase A waa enzim kaas oo xakameynaya lipid, glycogen, iyo waxqabadka dheef-shiid kiimikaad ee sonkorta. Korodhkeedu wuxuu kicin karaa saamayn gubasho leh ee jirka. Waxay kor u qaadaysaa waddooyinka kale ee ka caawiya gubida dufanka iyada oo loo marayo geedi socodka noolaha oo loo yaqaan oxidation fatty acid.
Sonkorta gubatay ayaa markaa loo isticmaalaa tamar si ay u fuliso hawlaha jirka. Waxay kicinaysaa mitokondria si ay u sii deyso ATP-yada, taasoo keentay kororka dheef-shiid kiimikaadka. Waxaa si weyn loo yaqaanaa in kororka qiyaasta dheef-shiid kiimikaadku uu ku caawiyo miisaanka luminta.
qaabdhismeedka kiimikada ee Salbutamol (Albuterol)
Salbutamol waa dawo lagu daaweeyo cudurada joogtada ah ee xannibmay iyo neefta ama cudurrada kale ee la xiriira COPD. Nooca daaweynta ee daaweyntu waa furitaanka ama dilitaanka marinnada neefsashada neefta inta lagu jiro weerarka neefta oo ba'an. Maadaama ay Salbutamol leedahay saameyn kicinaysa, dadka qaarkood waxay isticmaalaan daroogada neefta si ay kor ugu qaadaan baruurta ama miisaankooda.
Albuterol waa ku habboon tahay isticmaalka mashruuc miisaanka lumay sababtoo ah waxay leedahay saameyn la mid ah nidaamka korriimada iyo sida jimicsiga jireed. Waxay dhistaa culeyska muruqyada waxayna hoos u dhigtaa miisaanka guud.
Waxaa loo adeegsaday jidh-dhisayaasha si ay u gooyaan dufanka dheeraadka ah ee meelaha jirkooda oo adkaan karta in la xakameeyo ama lumiyo baruurta iyada oo loo marayo habab kale. Marka qaadashada daawadan loogu talagalay jidh-dhisidda iyo miisaanka luminta, waxaa badanaa la qaadaa kiniin ama dareere ah. Inkastoo aad isticmaali karto daawada Salbutamol miisaanka ama khasaare baruurta haddii ay tahay xulashada keliya ee la heli karo.
Orlistat waa xayawaan xoog leh oo lafa-beel ah oo lafa-beel ah. Dhammaan dheef-shiid kiimikaadka ayaa lagu qiyaasayaa gargaarka naasaha iyo xayawaanka caloosha. Dareemaha ayaa enzymatically u jajabisaa triglycerides galay asiidh dufan bilaash ah oo dambe ayaa lagu nuugi karaa mindhicirrada yaryar. Gastric iyo Pancreatic Lipase inhibitor ah waxay sameeyaan xididada leh lakiniga iyo naasaha gasfiga ee lumen ee mindhicirka yar iyo caloosha oo samaynta enzymes kuwaas oo aan awoodin inay si sax ah u shaqeeyaan.
Iyada oo la xakameynayo ficilada naqshadahan, dheef-shiid kiimikaad ah ayaa sidoo kale la joojiyaa, iyo triglycerides ayaa ka soo baxa saxarada. Daawada miisaanka lumisku waxay ka hortagtaa boqolkiiba 30 ee dufanka nafaqada ah ee cuntada laga soo gooyo nidaamka jirka bani'aadamka (marka 30 boqolkiiba tamarta cuntada ee la siiyo cuntooyinka triglycerides). Miisaanka celceliska miisaanka ka dib hal sano ka dib oo isku dhafan Xenical (orlistat) iyo isbedelka hab-nololeedka wuxuu ku wareegsan yahay 8.5 kg.
Iyada oo la yaraynayo nuugista xajmiga cunnada, ama budada miisaanka luminta miisaanka ayaa laga helay:
• Aad saameyn wanaagsan ku leedahay cadaadiska dhiigga;
• In la yareeyo nuugista kolestaroolka iyo sidaas daraadeed kolesteroolka (oo ay weheliso kolestaroolka LDL);
• Kobcinta caabbinta insulin-ta; iyo
• Kobcinta xakamaynta glycemic.
Waxaa si weyn loo maleynayaa in saameynta xun ee xanuunka caloosha ku jira ee liiska ay u dhaqmaan si la mid ah xoojinta xakamaynta, taas oo ku dhiirri-gelisa kuwa daawooyinkan si ay ugu adkeeyaan cuntooyinka dufanka yar.
Cetilistat waa oral firfircoon, novel, pancreatic iyo lipase lipase inhibitor.
Cetilistat daroogada luminta miisaanka waa daawo la soo saaray si loo daaweeyo cayilka. Waxay u egtahay mid la mid ah daroogada oo la yidhaa Xenical (orlistat) iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic, enzim oo jabiya triglycerides ee mindhicirka. Iyadoo aan lahayn enzymes, triglycerides ka yimaada cuntada waa laga hortagayaa in lagu nadiifiyo asiidh dufan bilaash ah oo la nuugi karo oo laga saaro jirka oo aan hoos udhicin.
Dhibaatooyinka bukaan socodka ee ku lug leh bukaanka maqaarka aan lahayn nooc sonkorowga 2 iyo bukaanka buka ee ku nool noocyada sonkorowga 2. Markii kiniiniga miisaanka loo yaqaan 'Cetilistat mastaroolo' waxaa loo maamulaa laba iyo toban isbuuc, waxay si weyn u hoos u dhigtay miisaanka jidhka, kolestaroolka guud, kolestaroolka lipoprotein-ka hooseeya ee hooseeya ee loo yaqaan 'lipoprotein' kolesterol si dhakhso ah marka la barbardhigo placebo.
Boqolkiiba dadka bukaan-jiifka ah ee muujinaya hoos u dhac weyn miisaanka jirka ee aasaasiga ah ee ugu yaraan 5 boqolkiiba ayaa ka sarreeya dhammaan cudubyada firfircoon marka la barbar dhigo cirbadda. Dhiiga bukaanka macaanku badan yahay, heerka HbA1c (glycosylated hemoglobin) ayaa sidoo kale si weyn u yaraaday. Cetilistat daroogada luminta miisaanka ayaa muujisay saameyn xun oo khafiif ah, taas oo badanaa keenta steatorrhea (dabeecada caloosha) oo leh hoos u dhac ku yaalo liiska. Daroogadaas ayaa dhowaan lagu ansixiyay Japan si loogu daaweeyo cayilka iyada oo ay jiraan dhibaatooyin kale.
Maqnaanshaha budada dhoobada
Sida laga soo xiganayo falanqaynteena faahfaahsan, waxaa jira dawooyin miisaanka oo badan oo ka yimaada kuwaas oo ka soo jeeda meelo badan oo dabiici ah. Daawooyinka intooda badan waxaa lagu arkay inay wax ku ool yihiin, qaar ka mid ahna waxaa lagu ansixiyey dhowr degmo oo kala duwan sida FDA iyo Japan, si loogu xuso dhowr, daaweynta buurnaanta.
Ka dib markii saacado badan lagu baarayay maan-dooriyayaasha miisaanka lumay, waxaanu awoodnay inaanu aqoonsanno dhowrka 2018 World's Best-selling Cawliyada Kaadi-mareenka. Noocyada dheeraadka ah ee budada miisaanka lumay waxaa ka mid ah maaddada miisaanka luminta miisaanka iyo budada miisaanka lorcaserin. Si ka duwan sidii looga baahnaa miisaanka luminta khasaarooyinka laga helo dukaanka dawooyinka, daawooyinkaas miisaankoodu hoos u dhacay kuwaas oo ay soo qoreen xirfadlayaasha caafimaadka ayaa maray sanado tijaabo ah si ay u helaan ogolaansho FDA ah iyo dhawr degmo kale. Waxaanu kugula talinaynaa in aad tijaabiso daawooyinkaas sababtoo ah waxaa lagu caddeeyey inaanay aheyn wax ku ool ah oo keliya laakiin sidoo kale waa ammaan in la isticmaalo.
Liistada liiska tixraaca:
Mog Arten09 / 21 / 2018 at 4: 11 pm
Waxaan jeclahay in ay jiraan daawooyin kala duwan oo ku saabsan duxda gubashada iyo dheefshiidka. Ka dhigidda dadka isticmaala 'caabbinta insulin iyo xakamaynta glycemic ka awood badan waxay u fiican tahay bedelkooda jirkooda. Waan xiiseynayaa inkastoo ay tahay in bukaanku u baahan yahay inuu ku tiirsanaado oo uu daawooyinkaan ku noolaado nolosha. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko daraasad ku saabsan saameynta fog.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 at 4: 02 pm
Waxay u egtahay miisaanka lumista miisaanka oo sii wanaajinaya oo horumarinaya wakhti ka dib. Waxaan xiiseyn lahaa haddii ay jirto shuruudaha amniga oo la isku dardarayo mid ka mid ah daroogooyinka lagu xusay qaybaha kala duwan. Waad ku mahadsantahay inaad wadaagto maqaalkan.
2018 ugu iibsashada badan ee miisaanka luminta miisaanka ayaa la tijaabiyay lana aamini. Waxaan u maleynayaa in dadka runtii u baahan yihiin kuwan, waa in ay isku dayaan. Waxaan hubaa inay u shaqeyn doonto sida sixirka.
Waxaa jira miisaanno badan oo macaamiisha ah ee suuqyada iibiya. Si daacadnimo ah, wax badan ayaan la hadlay ka hor iyo AASraw waa u qalantaa in la dhiso wada shaqeyn, waxaan u maleynayaa.
Diane Maxwell09 / 21 / 2018 at 9: 05 am
Wow, liistadan waa mid aad u adag. Waxaan u maleynayaa inaan hadda ogahay nooca miisaanka luminta lana doonayo inaan u baahdo. Anigu xitaa ma ogeyn in ay jiraan noocyo kala duwan sida shaqada / ujeedada. Thanks.
Caroline Warner09 / 21 / 2018 at 8: 58 am
Anigu dhab ahaan ma rumaysanahay "magic" ka dambeeya miisaanka luminta khasaaraha. Laakiin taas ayaa isbedeshay markii aan isku deyey ama liiska! Waxaan u maleynayaa in ay tahay tii ugu fiicnayd liiskaan.
admin, admin09 / 21 / 2018 at 3: 26 am
Hi Kitty, waxaad u diri kartaa baahidaada email noocan ah ([Email ilaaliyo]) haddii aad rabto wax budo ah oo miisaan leh. Daawada dhakhtarku qoro ama lagaa joojiyo, waxay ku xiran tahay. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican inaan kugu caawiyo inaad qaadato laakiin waxa fiican inaad weydiiso dhakhtarkaaga talo soo jeedin xirfad leh.
admin, admin09 / 21 / 2018 at 3: 14 am
Haa, Macaamiisha badani waxay leeyihiin amar nooc ah miisaanka miisaanka lumay.waxay sheegeen in ay si fiican u shaqeeyaan oo ay jecel yihiin. Sida dareenka caafimaadka, waxay ku xiran tahay, daroogo kasta waxay leedahay saameyn waxtar leh. Waa inay ubaahantahay in qiyaasta saxda ah loo qaato talooyinka dhakhaatiirta.
Stephanie Kamau09 / 21 / 2018 at 12: 02 am
Waxaa jira miisaan badan oo miisaanka lumay suuqa iyo helitaanka mid lagu kalsoon yahay oo shaqeynaya waa caqabad weyn. Waan ogahay dadka isku dayay miisaanka culus oo dhan oo aan isbeddel lahayn. Waxaan filayaa in shaqeyntu ay tahay inay noqoto ikhtiyaarka ugu horreeya ee dufanka laf dhabarta ka hor inta aan la qaadan daawooyinka dhakhtar qoray.
Kabtan U09 / 20 / 2018 at 10: 28 pm
Waxaan qaadan karaa tan kaliya sababtoo ah waxaan rabaa inaan ka baxo calool-istaagga. Waxaa laga yaabaa in aan nadiifiyo nidaamkayaga oo aan wax ku ool ah dhaqdhaqaaqa mindhiciradu waxay sameyn karaan khiyaamada.
Machine09 / 20 / 2018 at 9: 25 pm
Dhibaatada culeyska ayaa marwalba ahayd arrin qof walba rabo in uu eego wanaag. Waxaan dareemayaa in isbedeladani ayan weligood sii deyn doonin. Markaan tixgelineyno warbaahinta ayaa farta ku fiiqday fariinta ah in la eego wakhti fiican. Sidaa darteed waxaan filayaa in aan u baahanahay in aan isticmaalo budooyinka miisaanka lumay ama kaniiniyada luminta si aad u ilaaliso naftaada
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 at 3: 45 pm
Qalabka Clinbuterol iyo Salbutamol gaar ahaan wax ku ool ah daaweynta cayilka iyo hagaajinta shaqooyinka jirka. Guud ahaan, siyaabo kala duwan sida kuwaani waxay u muuqdaan kuwo aad wax ku ool ah oo isbeddel ah si aad u sameysid caafimaad wanaagsan.
Curt Rancher09 / 20 / 2018 at 3: 40 pm
Waxaan jeclaan lahaa in ay noqoto mid taam ah sida haweeneyda sare! Anigu waan jeclahay in taageeradani ay soo qoraan xirfadlayaal caafimaad oo awood u leh in ay ku guuleystaan ​​kormeerkooda. Natiijooyinka la helay bukaanka cagaarshow waxay ahaayeen kuwo gaar ah. Thanks for sharing!
Bianca Lively09 / 20 / 2018 at 5: 56 am
Ma aanan ogeyn in miisaannada luminta lumay ay leeyihiin kala-saaris kala duwan. Waxaan u maleynayey inay dhamaantood ahaayeen wax ku saabsan gubashada dufanka aan la rabin! Thanks for sharing!
Barney Winchester09 / 20 / 2018 at 5: 54 am
Wow, miisaanka lumisku dhab ahaantii dib ugu laabo 1800s? Anigu wax fikrad ah kama qabo waxtarka dheeraadka ah, waxaan isku dayayaa inaan lumiyo miisaanka, sidaas darteed u mahadsantahay maqaalkan warbixinta!
Nora09 / 20 / 2018 at 4: 49 am
Waad ku mahadsantahay liistadaan! Waxyaabo badan oo cusub oo cilmi baaris ah oo ku saabsan sida looga takhaluso dufanka caloosha iyo sida lumiyo dufanka jirka, iwm.
Nikki09 / 20 / 2018 at 2: 12 am
Waxaan kugula talineynaa isticmaalka dhammaan qodobadan dufanka luminta tan iyo markii ay soo martay sanado badan oo tijaabo ah waxaana lagu xaqiijiyay ammaan iyo shaqeyn. Noocyada miisaanka miisaanka luminayaa waxay noqon karaan baruurta jidhkaaga, dufanka dareeraha ee miisaan lumis, Waxaan ka doorbidayaa habkan si duxda dufanka leh. Waxaan ku kalsoonaan karnaa inay shaqeeyaan.
bola09 / 20 / 2018 at 2: 04 am
Certilistat waa nafaqo kale oo wanaagsan oo ah in dagaalyahanada duurjoogta ay isticmaalaan. Waxaan u maleynayaa inay run ahaantii aad u weynaan doonto muddada dheer marka dufanka jirku uu si fudud u nuugo.
gacmeed09 / 19 / 2018 at 10: 47 pm
Waxaan kugula talin doonaa Lorsearin dadka qaba cadaadiska dhiigga waxayna u roon tahay kuwa cunta weyn leh. Waxay kaa caawinaysaa xakamaynta cuntada iyo dedejinta dheef-shiid kiimikaad.
jecel09 / 19 / 2018 at 10: 37 pm
Olistat wuu ii fiicnaan doonaa aniga, waxay iibisay suuqa sida kaniiniyada alli. Waxaan ubaahanahay in aan isku dayo in aan ka baxo taas oo ay ka caawineyso in ay nuugto dufanka cuntada. Waxaan doorbidi doonaa dheefshiidka kor u qaadaya.
Sidney Moreno09 / 19 / 2018 at 9: 53 pm
Codadka maqalka sida quruxda aadka u fiican ee miisaanka lumitaanka, weligay mar hore ma aan maqlin daaweynta noocan ah laakiin waxaan u maleynayaa inay yihiin kuwo aad u faa'iido leh waxayna caawinaysaa dad badan, oo ay weheliyaan tababaro iyo caadooyin cunto caafimaad leh.
Kurt09 / 19 / 2018 at 9: 21 pm
Qof kasta ma isticmaali karaa daroogooyinka lumay miisaanka? Waxaan ula jeedaa ma jiraan wax walaac ah oo caafimaad ah oo aan marka hore tixgelinayaa? Waxaan u maleynayaa in faahfaahinta ay muhiim u tahay halkaan, laakiin, guud ahaan boostada.
Kitty Pryde09 / 19 / 2018 at 8: 53 pm
Tani ma heli kartaa meel kasta hadda? Daawo qora ama miiska Waxaan jeclaan lahaa in aan heysano faahfaahin faahfaahsan halkan. Xaqiiqdii, ugu yaraan daawooyinka daawooyinka ayaa halkan ku yaal.
Chatton09 / 19 / 2018 at 8: 34 pm
Ma haysto fikrad ah in budada miisaanka lumay ay yihiin awooddaas. Waxaan u maleynayaa inaad wali u baahan tahay jimicsi joogto ah markaad qaadato waxyaabahan dheeraadka ah. Weli, waxaan ku faraxsanahay akhriska blogga!
Rae09 / 19 / 2018 at 8: 28 pm
Aad ayaan u xiiseynayaa sida loola dhaqo dufanka caloosha. Qaar ka mid ah alaabooyinka aan ogahay waa muuqaal sidaas ayaan u aqriyay calaamadaha. Waad ku mahadsan tahay maqaalka warbixinta! Taasi waxay iga caawineysaa inaan ogaado sida loola dhaqmo miisaanka
Landen Burrows09 / 19 / 2018 at 3: 17 pm
Xeryaha Cetilistat iyo Clenbuterol ayaa xiiso leh sida ay u saameeyaan socodka jirka. Cetilistat, waa nidaam dheef-shiid ah oo jirka loogu talagalay, xinjirku wuxuu jidhkaaga ka caawin karaa baruurta gubanaysa. Waan arki karaa bukaannada codsanaya waxyaabahaan luminta dufanka, marka la eego in ay jiraan daraasado kiliinikaro ah oo la xaqiijiyay oo iyaga u gaar ah.
Mozer Torancher09 / 19 / 2018 at 1: 53 pm
Kuwani waa natiijooyin cajiib ah! Ka dhigista saameyn togan ee cadaadiska dhiigga iyo xoojinta koontaroolka glycemic ayaa ah saameyn qiimo leh si loo helo kaalmo dheeraad ah. mashaariicda miisaanka, qorshooyinka tababarka, qorshooyinka cuntada, iwm. kuwani waa mowduucyo kulul waxaanna jeclahay, waxaan u maleynayaa inay aad u caawineyso inaan billaabo qorshaha miisaankayga. Thanks for sharing!
Justin Dee09 / 19 / 2018 at 10: 41 am
Weligay iskuma dayin miisaanka lumista miisaanka, aniguna ma arko naftayda inaan tijaabiyo mustaqbalka dhow. Caadi ahaan waxaan u tagaa cunto culus, samee tirooyinka kalooriga iyo khasaaraha caloric oo si aad ah ugu shaqeeya jimicsiga. Miisaanka culus, oo la gaaro.
Marco Antonio09 / 19 / 2018 at 10: 39 am
Anigu waan ka walwalsanahay in aan isku dayo miisaanka luminta khasaarinta, laakiin maqaalkani waxa uu i siiyey sheeko ku saabsan sida run ahaantii u shaqeyso, iyo sida ay tahay. Waxaa jira daawooyin badan oo aad u badan, in aad dhab ahaantii leedahay inaad xejisato kaas oo u shaqeeya adiga ugu fiican. Dhakhaatiirta taqoolajiintu waxay noqon karaan bilaw fiican.
Charmaine Bush09 / 19 / 2018 at 9: 06 am
Orlistat waxay ii shaqeeyeen si cajiib ah. Waxaan rumaysanahay in miisaanka lumay aysan ahayn dhammaan daawooyinka oo kaliya. Waa inaan isku darnaa dhaqdhaqaaqa jirka iyo caafimaadka / miisaaman dheelitir si aad u aragto natiijooyinka aan rabno.
Jonathan Gordon09 / 19 / 2018 at 9: 03 am
Wow, daroogooyinkan oo dhan waa kuwo aad u adag. Isku dayey in ay miisaan culus ku waayeen sanadihii 2 hadda, illaa iyo hadda waxan arkayaa natiijooyin. Waxaa laga yaabaa inay tahay waqti aan isku dayo inaan qaato miisaanka luminta luminta.
admin, admin09 / 19 / 2018 at 5: 46 am
Saaxiib wanaagsan, walaac ma leh. Daroogo kasta waxay leedahay saameyno sida aan ognahay. Laakiin waxay ku xiran tahay. Waxaad ka heli doontaa faa'iidooyin badan oo ka yimaada budada miisaanka miisaanka haddii aad si sax ah u qaadato oo aad u fiicnaan laheyd isboortiska. Macaamiisha qaar ayaa amar ku siiyay budada sibutramin iyo budada lorcaserin, iyaga ayaa sheegay in ay si fiican u shaqaynayaan oo ay aad u jecel yihiin.
admin, admin09 / 19 / 2018 at 5: 37 am
Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga. Daroogo kasta waxay leedahay saameyn liddi ah. Waxay ku xiran tahay. Laakiin waxaan u maleynayaa budada lorcaserin iyo budada orlistat waxay noqon doonaan fikrado wanaagsan adiga oo raacaya khibrada macaamiisheena. Gaar ahaan loogu talagalay lorcaserin, waxaa soo wariyay BBC dhowaan wuxuuna leeyahay saameyno yar.https://www.bbc.com/news/health-45319393
Pascal09 / 19 / 2018 at 3: 21 am
Uma maleynayo inay jiri doonto wax dhibaato ah oo ku saabsan qaadista miisaanka lumay miisaantadan tan iyo markii la ansaxiyay FDA iyo Japan.Anyaha kaabayaasha ah waa in loo isticmaalaa miisaan lumis ah, sababtoo ah waxay luminayaan dufan la'aan. Waxaa intaa dheer qorshaha cuntada lumay miisaanka, waxaad ku gubi kartaa dufanka si dhakhso ah.
Way fiicnayd inaad soo bandhigto miisaannada lumay miisaanka ugu fiican. Waxaan akhriyey su'aalaha sidan oo kale ah ee ku saabsan mawduucyada miisaanka culus iyo jawaabaha macquul ah ayaa si dhib yar loo siiyaa. Waxaan rajeynayaa kuwa dhab ahaantii u baahan macluumaadkan inay helaan si ay u arkaan.
Lisa Nataliany09 / 19 / 2018 at 12: 58 am
Waan jeclahay cunida iyo cabbitaanka, sidaa daraadeed miisaanka oo idil waa marwalba. Haddii kabadani ay awoodaan in ay daryeelaan jirkeyga oo aan u baahnayn in ay tagaan cunto, markaa waa wax aad u fiican inaan helo buuggan. Mahadsanid!
David Tjoe09 / 18 / 2018 at 10: 21 pm
Weligay iskuma dayin miisaanka lumista miisaanka, aniguna ma arko naftayda inaan tijaabiyo mustaqbalka dhow. Caadi ahaan waxaan u tagaa cunto culus, samee tirooyinka kalooriga iyo khasaaraha caloric oo si aad ah ugu shaqeeya jimicsiga. Miisaanka culus, oo la gaaro. Laakiin qaar ka mid ah dadka caanka ah ee aan arkay, way adagtahay in ay miisaanka lumaan, sababtoo ah ku tiirsanaanta jir-dhiska iyo kontoroolka qiyaasta kalooriga ma gaari karto miisaanka ay rabaan. Waxaa laga yaabaa in kiniinada lumay miisaanka ay kaa caawin karaan.
Alex Summers09 / 18 / 2018 at 8: 45 pm
Dhammaan baradhada sariiraha waa inay qaadaan daawadan si dhab ah waxayna fiiriyaan sida ay u lumi karaan miisaan la'aan walaac badan oo gaar ahaan kuwa aan jimicsi lahayn. Samee qorshe cunto ah ragga, u sheeg in ay cunaan cunto caafimaad leh, cun cunno caafimaad leh. Miisaankaaga oo la cuno maahan habka ugu dhakhsaha badan ee dufanka
Scott Summers09 / 18 / 2018 at 8: 26 pm
Waa inaan marka hore dhakhtarkeyga weydiistaa haddii ay taasi amaan tahay inaan qaato. Tani ma xitaa hadda la heli karaa? Si daacadnimo ah, waxaan kaliya ka aqaan wax yar oo ku saabsan budada sibutramine iyo budada orlistat ee saaxiibkay. Waxaan filayaa in aan u baahanahay in aan wax badan barto markaa wax samayn.
Moz Chesk09 / 18 / 2018 at 3: 07 pm
Waan ku faraxsanahay inaad ku dammaanad qaadi karto waxyaabahani inay yihiin kuwo amaan ah oo wax ku ool ah. Cunto-qabayaasha cuntada qabta sida budada Sibutramine iyo budada Lorcaserin waxay u muuqdaan kuwa ugu qiimaha badan sida ay u daaweeyaan maskaxda iyo jidhka. Anigu waxaan arki karnaa daroogooyinkaas oo saameyn ku yeesha nolosha dadka ee leh cilmi-baarista oo dhan si ay u deymiyaan.
Maury Cheskes09 / 18 / 2018 at 3: 00 pm
Aad ayay u fiicantahay kuwan oo dhan ayaa lagu tijaabiyey in ay lumiyaan miisaanka. Waa wax cajiib ah sida qaar ka mid ah ay u shaqeeyaan sida Orlistat iyo Synephrine leh dheefshiidka iyo dufanka gubanaya. Thanks for sharing!
Kuttan09 / 18 / 2018 at 10: 50 am
way fiican tahay, laakiin miyuu leeyahay saameyno ka yimaada miisaanka, hase yeeshee intaa ka sii walaacsan tahay caloosha ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigto dhammaan qaybaha kale ee jirka sida OK, sida sibutramine, waxaan rabaa in aan tijaabiyo qaar laakiin waxan ka walwalayaa saamayntaas. I caawiya?
Marc P09 / 18 / 2018 at 10: 46 am
Tani waxay dhab ahaantii badbaadin kartaa nolosha, waxaan hubaal ka dhigayaa in qoyskeyga iyo asxaabteyda ay ka warqabaan tan. Waxaan ula jeedaa inaan u baahannahay inaan hubino in wax kasta oo aan qaadaneyno budada miisaanka luminaya aysan waxyeello u keeneynin caafimaadkeena.
Charlene G09 / 18 / 2018 at 10: 43 am
Waxaan si dhab ah u qaatey waxyaabo badan oo dheeri ah laakiin wax walbo oo aniga igu shaqeyn waayay. Iyo qaar ka mid ah waxay sameeyeen saameyn xun oo xun. Way fiican tahay in maqaalkani muujiyo macluumaad aad u faahfaahsan oo ku saabsan kaalmada dheeraadka ah. Waxaan rajeynayaa inaan isku dayi karo in aan isku dayo qaar ka mid ah budada miisaanka lumay sidoo kale iska ilaali waxyeelooyinka qaarkood. Wax talo bixin ah?
Fatty Patty09 / 18 / 2018 at 9: 37 am
Waxay ku jirtay kiniin ay sameeyeen budada orlistat. Ma cuni karo cuntooyinka dufanka leh, farmaajada ama KFC! Waxaan ku dhamaanayaa calool xanuun caloosha iyo ... waad taqaan. Hahaha
Budada Orlistat waxay saameyn wanaagsan ku leedahay miisaan lumis iyo waxaan ogaa qofkii ku jiray.
Waxaan u baahanahay inaan tijaabiyo Lorcaserin HCL tan iyo markii ay aad u fiican tahay dheef-shiid kiimikaadkuna sidoo kale wuxuu joojin karaa diidmada cuntada. Cunto cunista waxay had iyo jeer ahayd dhibaatada ugu weyn.
nabadda09 / 18 / 2018 at 8: 39 am
Maqaalkani waa aniga aniga oo idil maxaa yeelay waa inaan isku dayaa inaan waayay wakhti dheer. Mashruucani waa mid waqti gaaban ah oo loo baahan yahay inuu soo qaato waxtarka ugu wanaagsan ee gubashada gubashada si uu u isticmaalo. Kadibna waxaan ka fekerayaa nooca miisaanka miisaanka lumay aniga oo aan iibsanayo mustaqbalka dhow.
gawaarida09 / 18 / 2018 at 5: 17 am
Waxaan soo qaatey calool-mareenka ka hor inta aan miisaanka lumin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan maleynayaa inay saameyn xun ku leedahay aniga oo aan joojiyo inaan qaato. Weli waxaan ka walaacsan yahay miisaanka miisaanka culus ee miisaanka.
Laura09 / 18 / 2018 at 4: 27 am
Waxaan isku dayay miisaan culus oo badan ka hor intaan laakin nasiib xumo uma aysan shaqeynin aniga. Waad ku mahadsantihiin maqaalkani. Ilaa hadda, waxaan jecelahay jirkeyga oo kaliya sida ay tahay.
Aad ayaan u la yaabanahay in ay jiraan miisaan badan oo miisaan ka baxsan oo ka baxsan suuqa. Isku dayay inaad ku qaadato hal maalin si aad u dhammaystirtid doorashadeyda nololeed ee hadda. Si kastaba ha ahaatee, waxay u egtahay inaan u baahanahay daawooyin gaar ah kaliya xitaa xitaa mid ka iibso miiska Ama ma jiraan daroogo aan heli karo iyada oo aan loo baahnayn daawooyinka?
Pritesh Vishwakarma09 / 18 / 2018 at 12: 47 am
Mishiinka culus ee miisaanka culus lagama yaabo in qofku u fiicnaado. Dadku waxay xasaasiyad u leeyihiin qaar ka mid ah nafaqooyinka leh miisaanka miisaanka lumay waa in ay raadiyaan dabeecado dabiici ah.
bran09 / 17 / 2018 at 11: 40 pm
Liiska faahfaahsan ee miisaanka miisaanka adduunka adduunka ugu wanaagsan.Ka jecel diyaargarowga sababtoo ah waxaa jira marwalba waxtar leh gaar ahaan haddii xakamaynta dareenka iyo jimicsiga wanaagsan lagu daro sidoo kale. Ku calaamadee boggaan mustaqbalka.
Bassy09 / 17 / 2018 at 11: 34 pm
Tani waa boosteejo weyn oo aniga ii ah, waxaan ku jiraa safar culus oo miisaan culus waxaan la tacaaley miisaankayga tan iyo dugsiga sare. Waa inay fiiriyaan Sibutramine HCL (Meridia) CAS.it waxay u muuqataa inay noqon doonto waxa aan ahay
dhab ahaantii u baahan doonaa.
Vikram Parmar09 / 17 / 2018 at 10: 57 pm
Waxaa jira daroogooyin badan oo kaa caawin kara miisaanka. Daawooyinkaasi waa kuwo aad waxtar u leh.
Jiffy Rando09 / 17 / 2018 at 9: 37 pm
Meds + tababarka iyo dabcan wax cunaya waa hubkaygii miisaanka lumay. Inkastoo aan joojiyay hadda in yar oo dufanka ku haya. Waxaa laga yaabaa in markii aan dib ugu laabto jadwalkayga aan isticmaali doono.
Erza Scarlet09 / 17 / 2018 at 9: 23 pm
Sidee qofna ma uga hadli daawooyinka? Waxaan had iyo jeer halkan u joogaa dhinaca jirka ama dhinaca nafaqada ciyaaraha marka la eego mawduucan, laakiin tani waa markii ugu horeysay ee daawooyinka ay miiska saaran yihiin. Kaalmooyinka laga yaabo inay weli jiraan. 2
Janice09 / 17 / 2018 at 10: 38 am
Waxaan isku dayayaa in aan lumiyo miisaanka, sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ku dhex maray maqaalkan oo bixinaya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan doorashada xulashada miisaanka oo ku haboon. Tani waxay i siisaa macluumaad faahfaahsan oo aan ku habbooneyn oo aan ku sameyn karo doorashada ugu fiican ee aniga ii. Mahadsanid!
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa 2018 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa ee Armodafinil
Dr. Patrick Young on Oxandrolone (Anavar) budada
Michael McCoy on Oxandrolone (Anavar) budada
Biyo cad (Aromasin)
Sunifiram (DM235) budada
Budada Caffeic Acid Phenetyl Ester (CAPE)
MK-677 (Ibutamoren) miyuu si fiican ugu shaqeeyaa Dhismaha Muscle? Dib u eegista Sarm [2019 NEW]
10 Steroids Ugu Caansan ee Anabolic-ka ah Matoor
Xuquuqda daabacaada © 2019 aasraw Loo habeeyay www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com